Wacyigelinta Dadweynaha - Somalione
Shaqadeena Wacyigelinta Dadweynaha
Somali One waxay ka hawl gali doontaa wacyigelinta shacabka ee ku aadan arrimaha ahmiyada leh ee ka taagan dalka iydoo la isticmaayo shirar, TV-ga, barnaamijyada ka baxa raadiyaha iyo barta internet-ka. Hadafka laga leeyahay wacyi galinta ayaa ah sidii loo hormarin lahaa ka qeybgalinta muwaadiniinta Soomaliyeed la xisaabtanka dawladda iyo sidii sare loogu qaadi lahaa heerka kalsoonida ee u dhaxeeya dawladda iyo shacabka.
“shacab baraarugsan wuxuu muhiim u yahay habsami u shaqeynta dawlada.is-maamul dawledeed ma suuragalayo hadii aan shacabka aqoon ku filan laheyn si uu u gudo kaalinta kormeer ee lagula soconayo dawladda. Sidaasi darted waxaa haboon inuu qaranka/dawladda ay waxbarto dhammaan shacabkeeda .”Thomas Jefferson
Soomaaliya waxay gaareysaa xasilloni, nabad iyo hormar dhaqaale goortuu shacabkeeda noqdo kuwa aqoon leh oo hadana xog-ogaal ah, lana xisaabtami kara dawladooda, kalsoonina ku qaba xukuumadooda.
Somali One waxay sidoo kale hormarin doontaa ka qeyb-gal wadareedka siyaasadda iyo wadahadallada loo abaabulay qaab cilmiyeysan oo dhexdhexaad ah, iyadoo looga doodi doono arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo maamulka si is-afgarad iyo go’aan waafaqsan dhaqanka, hiddaha iyo taariikhda Soomaaliyeed loo gaaro.